Nhau - Shingairira kuvaka dziviriro yekuchengetedza hutano hweveruzhinji
Dzvanya panharembozha kuti ugadzire zvakananga kusangana kwenguva yenicic acid yekuyedza, kubhadharisa pamhepo, pane-saiti sampling, mushure meye-chokwadi nharembozha pamhedzisiro mhinduro… Pakati paNovember, Shanghai "Health Cloud Nucleic Acid Testing Registration Version 2.0 ″ Yakavhurwa kuti ishandire hupfumi nehungwaru, hunyanzvi, uye inoteedzana nzira Kumhanyisa kwekugadziriswa kwevanhu kwakasimbisa mutsetse wekudzivirira wedhorobha.
Iyo nyowani korona denda inorova uye "madzinza" kurwisa hutachiona. Mutsara wemabasa mitsva zvisati zvamboitika zvichakurumidza kuwedzera muna 2020. Kubhabhatidzwa kwe "chirwere" chehondo kwaitawo kuti vanhu vazive zvakanyanya kuti hutano hweveruzhinji chikamu chakakosha chekuona hutano hwevanhu vese.
Gore rakakosha, zviito zvakakosha! Chegumi Plenary Session yeEgumi neimwe yeMaspala Party Committee yakaitwa mazuva mashoma apfuura yakasimbisa kukosha kwekuita basa rakasimba mukupedzisa kweGumi nematanhatu Yemakore-mashanu Kurongwa uye kutanga kweGumi nerechina-Makore mashanu Ehurongwa. Takatarisana nedambudziko razvino mamiriro, isu tichagara tichichengetedza mwero wepamusoro wekusvinura, mhinduro yesainzi, kupindura zvine mutsindo, uye kunyatsoita mashandiro emitemo, kuenderera mberi nekusimbisa zvakajairika denda rekudzivirira uye kutonga uye kugona kuita zvechimbichimbi, uye kuita basa rakasimba "Yekunze yekudzivirira yekuisa uye yemukati yekudzivirira rebound".
Bhurocha idzva rinotorwa, uye rwendo rutsva runotanga. Shanghai yekurapa uye hutano system inobata basa rayo, uye iri kuita nhamburiko dzese kuvaka dziviriro yehutano hweveruzhinji nehungwaru rwezivo, nzira yekupindura, uye hushingi hwekutsvaga shanduko, kuvaka mutsetse wakasimba wekudzivirira vanhu anorarama, uye kunyora nguva nyowani "guta, ita hupenyu huve nani Chitsauko chitsva mu" yakanaka ".
Simbisa kumberi-kutarisira uye kuvaka hwakakwana huzhinji hutano hurongwa
Musi waNovember 1, iyo "Mirau yeShanghai Municipality paParuzhinji Hutano Emergency Management" yakatanga kushanda. Kubva pakuongorora uye kunyevera kwekutanga kumhinduro yechimbichimbi, chiitiko chakapfuura chakapfupikiswa muzvikamu gumi nezvinyorwa makumi masere neshanu. Kugadzira hutano hweveruzhinji emergency system manejimendi ye "kudzivirira kutanga, rugare nehondo zvakabatanidzwa", Shanghai, guta mega, iri kugara ichivaka tambo yakasimba uye yakasimba yeruzhinji yekudzivirira. Iyi zvakare ndiyo nyika yekutanga dunhu-chikamu denda rekudzivirira uye kudzora mitemo.
Kudzivirirwa kwedenda muDacheng kunoda mhinduro nekukurumidza uye chaiyo, pamwe nerutsigiro rwemasangano. Kudzoka munguva muna Ndira 20, 2020, Shanghai yakashuma yekutanga yakasimbiswa kesi ye new coronary pneumonia; musi waNdira 24, paEvha yeGore Idzva, Shanghai yakatanga chirongwa chekupindura chekukurumidzira kwehutano hweveruzhinji. Kubuda kwe "denda" rehondo kwakatungamira kuchinjiro mune yakadzika-nhanho system. Musi waApril 7, Shanghai yakaita musangano weveruzhinji wekuvaka hutano ndokuburitsa "Maonero Akawanda Ekuvandudza Kudzivirira uye Kudzora Sisitimu yeMajuru Epidemiki uye Kuvandudza Ruzhinji Hutano Emergency Management System" (inonzi "Shanghai 20 Veruzhinji Hutano Kuvaka"). Musangano wakataura zvakajeka: Na2025 Shanghai richava rimwe remaguta akasimba muhurongwa hwepasi rose hwehutano.
"Tiri kurwisa denda iri, uye tinoona nekukurudzira kuvandudzwa kwehurongwa hwehutano hwemaguta, uye tinoedza kupisa nzira yepamusoro-soro hutongi hwehutano hweveruzhinji." Muzvinafundo Luo Li, Secretary Party weChikoro cheRuzhinji Hutano hweFudan University, akaudza vatori venhau. Iyo "pfungwa" iri kumashure kwekuvakwa kweiyo chaiyo sisitimu yehutano hweveruzhinji chengetedzo hutongi mumega-maguta iri mune: Chekutanga pane zvese, kusimbiswa kwekudzivirira ndeyekuzadzisa kwekutanga kunyeverwa neyakareruka uye yakakwana chirwere kudzora uye neruzhinji hutano hutano. Kechipiri, kutsvaga kwe "zero kuitika" hakuenderane nezvazviri. Naizvozvo, kana zviitiko zveapo neapo zvikaonekwa, kudzima "murazvo" nekumhanyisa zvakanyanya uye nemutengo wakaderera uye kuchengetedza mashandiro ehupenyu hwehukama nehupfumi ndizvo zvinofanirwa kuteedzerwa nehurongwa.
"Kubva pamaonero aripo iye zvino, kudzivirira kwedu chaiko uye kudzora uye nekukurumidza kuraswa kwezviitiko zvenguva pfupi yadarika zvakatoratidza kushanda nesimba kwekusimudzira nekuvaka hutano hweveruzhinji." Luo Li akataura kuti muhondo yekurwisa new korona pneumonia denda, Shanghai ine makambani zana negumi nematanhatu muguta rese. Makiriniki efivha uye makiriniki mazana maviri enharaunda yechirwere chefivha akaita basa rakakosha. Tichitarisa kumberi kune ramangwana, kuvaka "bronze uye simbi madziro" yedhorobha rekudzivirira nekudzivirira, kubva pakuvandudza kweveruzhinji hutano system kusvika pakuvaka kwekuranga masystem uye matarenda senge hutachiona, mweya wekufema, uye kwakanyanya kurapwa mishonga richava basa renguva refu, rinoda kutsungirira. Kuti uite, zvinodikanwa kuti usimbise iyo inotarisisa-dhizaini uye kuronga kuronga, uye kubata danho rekutanga rebasa.
Zvakakodzera sangana nezvinodiwa nevanhu uye mhanyisa shanduko ye "Smart Dhijitari Chipatara"
Chikamu chevazhinji chakaratidza kuti isu tinofanirwa kukwidziridza shanduko yedigital yemaguta. Iko kushandurwa kwedhijitari kwemaguta inyaya nyowani, sisitimu yeinjiniya, inovhara ese matunhu ekugadzirwa kwemaguta, hupenyu, uye ecology, kusanganisira zvehupfumi kudhijitari, hupenyu hwekuita nedhijitari.
Kukurumidzisa kushandurwa kwedhijitari nekuvaka zvipatara "zvine hungwaru" ndizvo zviri kudiwa nevanhu izvozvi. Maererano nenhamba dzichangoburwa, zvipatara zveInternet 43 muShanghai zvakaparura zveInternet kuongororwa nekurapwa, uye "Internet + Nursing Services" ichiri kuyedzwa kumatunhu mana anosanganisira Changning, Jing'an, Putuo, nePudong.
KuXuhui District Central Hospital, sezvo chakave chipatara chekutanga chevanhu muShanghai kuwana rezinesi reInternet muchipatara muna Kukadzi gore rino, kubvunzana kwekurapa pamhepo, "gore" kubvunza kwekutevera, inishuwarenzi yekurapa online kubhadhara, uye kuendesa mishonga kumba zvakaonekwa muchipatara ichi. Kubva munaNovember 27, "Xuhuiyun Hospital" yakagamuchira vanopfuura zviuru makumi matatu nezvishanu uye vakapa 6,557 zvirevo. "Kuona chiremba kumba usingabvi pamba" yazova tsika yezuva nezuva kune vanhu vazhinji.
“Nekuda kwerutsigiro rwemitemo yakawanda, Xuhuiyun Hospital yakawana budiriro iri pachena. Parizvino, avhareji nhamba yekubvunzana pamhepo pazuva is 400-500, uye hunhu hwekutaurirana hwaitawo kukwikwidza kwemhando yepamusoro: kubvunza kwehutano kuri nyore vashoma, uye kudiwa kwemasevhisi ekuchengetedza ndiko kwakawanda. Muchidimbu, zvatinoita 'hutano hunongodiwa' nevanhuwo zvavo uye kugadzirisa matambudziko akateedzana. ” akadaro Zhu Fu, director director weXuhui District Central Hospital.
Kubudirira uye kushandiswa kwedata rekurapa rakatove rakapinzwa muhupenyu hwevagari veShanghai. Mushure mekuputika, "kodhi inechishandiso" yakave "yakajairika gadziriso" yevagari veShanghai kuti vafambe, izvo zvisina kungoita kuti zvive nyore kuvagari, asi zvakare zvakadzora kumanikidza kwekudzivirira nekudzora kwedenda. Seyakakosha pokutangira ye "network imwechete kuvhura" uye "imwechete network yakabatana manejimendi", ichi chishandiso chakaburitswa chikumbiro hachina kumira pa "nzira dzinobatsira", asi chakaramba chichiwedzera mashandiro acho, ichichinja kuita kodhi yebasa inotakurika iyo munda weveruzhinji manejimendi uye masevhisi.
Pakiriniki yevarwere yeEast Hospital yeRenji Hospital, Mai Li vakaita mumutsetse kuwindo rekunyora uye vakaona kuti vaimhanyira kubuda mangwanani uye havana kuuya nekadhi reinishuwarenzi yekurapa. Kumushamisa kwake, chipatara chakaparura chiitiko chitsva kutsigira "kurasa kutengisa" kwekadhi reinishuwarenzi yekurapa, ndiko kuti, shandisa nharembozha kunyorera chitupa cheinishuwarenzi chemagetsi online. Mushure mekushandisa kwabudirira, tarisa hwindo neiyo kodhi yeQR uye teerera chete ku "di" Nenzwi rimwe chete, kunyoreswa kweinishuwarenzi yekurapa kwapera.
Kutenda kune "One Net Service" kuvhura "Chimwe Chinhu Chekurapa Kwekurapa", iyo "Nyorera Kodhi" uye "Medical Inishuwarenzi Voucher Voucher" zvakabatana, uye ikozvino vagari veShanghai vanogona kushandisa "Nyorera Kodhi" kunyorera kunyoreswa muzvipatara zveveruzhinji. muguta rose. Kurapwa, kubhadhara uye mamwe maitiro.
Kutarisana ne "zvisina-kutaurirana" zvakasarudzika zvezvirwere zvinotapukira, zvinokurudzira kushandurwa kwezvipatara zvemuviri kuva "zvipatara zvemadhijitari zvakangwara". Zhu Fu akaudza vatori venhau kuti chikuva cheXuhuiyun Hospital chiri kuramba chichiwedzera. Mune ramangwana, eInternet masevhisi ekurapa acharamba achinyatso kusangana nezvinodiwa zvehutano zvevanhu, uye kuongorora shanduko dzakadzama pamwe chete nezviremera zvemitemo uye mapuratifomu ehunyanzvi
Takatarisana neYangtze River Delta uye yakatarisana nenyika yese, ichienderera nekuvandudza nhanho yebasa rehutano
Pakupera kwegore, pane chidimbu chemashoko akanaka anoita kuti vanhu vafare: Shanghai yapedza mabasa egore pamberi pechirongwa pakupera kwaGumiguru muna 26 matunhu ehurumende mapurojekiti anoshanda munzvimbo gumi munzvimbo ino.
Kutora danho rapfuura kuronga marongero, ramba uchitarisa zvine simba pane manejimendi manejimendi, kuitira kuti vanhu vave nepfungwa chaiyo yekuwana. Zvirongwa zvehurumende yemasipareti makumi maviri nematanhatu zvinosanganisira: kuwedzera 7,000 mibhedha yevakweguru, nekuvaka nharaunda makumi mashanu nyowani senzvimbo dzekare dzekushandira; 200 yenzvimbo dzekudyira nzvimbo dzevakwegura, dzakagadziridza mabhedha e2,000 ekuchengetwa kwehunyanzvi hwekuremara kwekuziva; ichangobva kuvakwa 11 ekurapwa kwechimbichimbi (120); akawedzera zana ehutano smart smart, nezvimwewo kuseri kweiyi nhamba yenhamba ndiko kushuvira kwevanhu uye kutarisira kwehupenyu hwepamusoro.
Yakavakirwa muQingpu, ichishandira iyo Yangtze Rwizi Delta, uye yakatarisana nenyika yese, muna Gumiguru 24, iyo Yangtze River Delta (Shanghai) Internet Hospital yakaiswa mukushanda. Inovimba nerutsigiro rwebhizinesi rweZhongshan Hospital yakabatana neYunivhesiti yeFudan uye zvinovakirwa pakuvakwa kweZhujiajiao People's Hospital muQingpu District kuti ibatanidze zvemhando yepamusoro zvekurapa muYangtze River Delta mudunhu. Kuvandudza hutano hwehutano hweYangtze River Delta Eco-Green Yakabatana Budiriro Yekuratidzira Nzvimbo, uye nekuenderera mberi nekufambisa kusimudzira kwehungwaru mishonga, zvekurapa zvigadzirwa, inishuwarenzi yekutengesa, uye kushanya kwekurapa muYangtze Delta Chiratidziro Chikamu.
Yangtze River Delta (Shanghai) Internet Hospital yapedza chikamu chekutanga chekuvaka, uye pane zvirongwa zvechikamu chechipiri chekuvaka. Wu Jinglei, director weShanghai Municipal Health Commission, paakataura nezve chiono chenguva refu cheYangtze River Delta Internet Hospital, akataura zvakanyanya kuti aitarisira kuti chipatara ichi, icho chakazvarwa chine zvinhu zveInternet, chaizotarisa pane ruzivo rwevarwere, batanidza kukosha kwekubatana, uye shanda nesimba mune ino yekuyedza munda wehunyanzvi hwekurapa tekinoroji. "Ramba uchiteerera ruzivo rwevanhuwo zvavo pakurapa, uye gara uchisimudzira modhi yebasa, kuti uve chiratidzo chekurapa chakangwara muYangtze River Delta, nyika yese uye kunyangwe muAsia, zvichitungamira budiriro yeramangwana."
Funga mamiriro ese ezvinhu, shandira iyo yakazara mamiriro, uye uvhure mutsva mutambo, iro ramangwana rinogona kutarisirwa. Mwedzi uno, seimwe yemapurojekiti akakosha e "Healthy Shanghai Action (2019-2030)", chirongwa chekutanga chakakwana chehutano hwehurongwa hwekuvaka hwakazadzikiswa, chinozoongorora zvine mutsindo marongero ehurongwa hukuru hwehupfumi nehupfumi, marongero , uye mapurojekiti einjiniya pane hutano hweveruzhinji. pesvedzero. "Hutano hwakabatanidzwa mumazano ese", Shanghai iri kuramba ichiita nekushanda pamwe chete kuchengetedza hutano hwevanhu.